Ihlabathi leJurassic, naliphi na ixesha elidlulileyo belingcono | IPhone iindaba
Ihlabathi leJurassic, naliphi na ixesha elidlulileyo belingcono
UMiguel Hernandez | | IPhone iindaba, Ukuzonwabisa
Kwelam icala, ngokusungula icandelo "lokuzonwabisa" kwiwebhusayithi yethu, apho ndiza kuncomela khona iifilimu ukusukela izolo nanamhlanje, andinakuyeka iintlungu ezinkulu eziye zaya kumboniso bhanyabhanya kwaye ndabona iJurassic World. Abona bantu bathanda isaga, abo bethu benze iJurassic Park marathons, besiluma iinzipho zethu silinde ukufika kwe-12 kaJuni. Ukuthontelana ukuya kwiindawo zemiboniso bhanyabhanya ezikufutshane ngenjongo zokuphinda ushumayele kwakhona ngembali engoyikiyo yeedinosaurs, iDNA, velociraptors kunye neadrenaline. Nangona kunjalo, ayiyiyo yonke into ekhanyayo.
Ngokuthi krwaqu, ucinga ukuba usete entsha irekhodi lembali yengeniso ye- $ 511,8 yezigidi kwihlabathi liphela kwimpelaveki yokuqalaPhantse isiqingatha sokuba se-United States, nabani na unokucinga ukuba sijamelene nomsebenzi wobugcisa, kodwa kunjalo, abaphulaphuli abafanayo abayiyo kwi-cinema njengangaphambili, kwaye ngexabiso elifanayo. Ngamafutshane, ndiyazivumela ukuba ndishwankathele uDaniel De Partearrollo, umhleli weCinemanía, xa ebonisa ukuba Ifilimu ithatha ukulunywa ngokuchanekileyo, kodwa kungashiyi mkhondo.
Siza kuqala ngoBryce Dallas odlala indima phakathi kwe-insubstantial kunye ne-comic, ephantse ingathethi ngokupheleleyo, kude lee noko uLaura Dern asinike kona eJurassic Park kwaye kude kakhulu noJulianne Moore kwiLizwe eLilahlekileyo. Ngamafutshane, akunakulibala ukuba yonke imovie ichithwa kwizithende., Owayedlala kwimidyarho emfaneleyo u-Usain Bolt kwaye okona kubi kakhulu, ephazamisa indima kaChris Pratt, eyeyona nto ifanelekileyo kwifilimu. Umlingisi ongumthonyama waseVirginia wayekwi-Sam Neill ngokwakhe, okanye ubuncinci phantse, kodwa ukuphepha ukuthelekisa akunakwenzeka.
Ukuqhayisa ngeziphumo ezizodwa kwenza iidinosaurs (ezithi, ngendlela, zingangcolisi, okanye zophe) zibonakale ziqhelekile kumdlalo wevidiyo kunomboniso bhanyabhanya, kwaye kukolu hlelo bagqibe kwelokuba bakhethe ukugqitha kwiziphumo ezikhethekileyo zedijithali, ungasebenzisi thuba lobunyani be-animatronics iyonke, ngokungathandabuzekiyo engafezekisi isiphumo esiyinyani njengaleyo yeedinosaurs zomatshini kwiindawo ezazinxitywe nguSpielberg kwiinguqulelo zakhe zangaphambili, kodwa ngaphezulu kwawo wonke umdlalo omnyama wezibane zohlelo lokuqala ulityelwe ngokupheleleyo, kunye nefoto eshiya okunqwenelekayo kunye neeseti ezinomtsalane, ethi kwizigcawu zokugqibela ziwele kwisingqi sabo, ipapaer-mâché emsulwa.
Nangona kungenakuphikwa ukuba umboniso bhanyabhanya uyonwabisa, awuzukungena ezembalini ngokuhlonipha abo bangaphambili (ngakumbi owokuqala nowesibini), kodwa kunjalo, Kulapho siqonda khona ukuba umlawuli nguColin Trevorrow hayi uSpielberg., kwaye nangakumbi ngeli xesha apho i-cinema yorhwebo ikwimeko yayo elungileyo, singatsho ukuba iskripthi seJurassic World sikude ngelishwa, ngaphaya komanyano lomntu weedinosaur kunye namanqaku athile ohlekiso abekwa nge-shoehorn. Ngokuqinisekileyo ngumboniso bhanyabhanya oza kuwubukela, ukonwabele, kodwa ungonwabisi. Nangona kunjalo, iyaqhubeka nokuvumela ushicilelo lwesithathu lweJurassic Park ukuba lubambe imbeko ethandabuzekayo yokuba lelona libi kakhulu kwi-saga. Kodwa kuKesare okukaKesare, Intlonipho yesandi santlandlolo kunye nokusetyenziswa kwayo ngamaxesha athile kuyeyona nto ibalaseleyo kwifilimu.
Hi ndlela leyi, andikwazi ukuthi ndlela ntle ngaphandle kokufaka ihlombe kumenzi webhetri weJurassic Park Jeep eyahlala kwiJurassic World kwaye amakhwenkwe aqala emva kweminyaka emininzi. Kufuneka iqeshwe ngabakwaTesla Motors. Kwaye khumbula ukuba ekupheleni kwenqaku ngalinye ndiza kuyikala imovie, ngokungathi kunokwenzeka kodwa ndikhumbule ukuba ndithetha ngokwembono yam. Kwaye ungathandabuzi ukushiya amagqabantshintshi kuyo nayiphi na ifilimu ofuna ukuyicebisa okanye ufuna ukwazi okuthile ngayo, nokuba yeyodidi okanye intsha, ukuze sikwazi ukuyihlalutya. Kwaye ucinga ntoni ngeJurassic World?
Inqaku lomhleli: 5.5 / 10
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Ukuzonwabisa » Ihlabathi leJurassic, naliphi na ixesha elidlulileyo belingcono
Andivumi kwaphela. Kubonakala kum kungaphezulu kwe-2 kwaye ngakumbi i-3. I-Spielberg's 2 yayinayo kodwa asinakulibala imifanekiso efana nentombazana eyenza iivili ezinamavili ezingenangqondo ukukhaba i-velociraptor. Okanye ukuba uJeff Goldblum uphantse alwe ezi xa ebaleka kubo, ebethana njengamageza. Kwaye imeko ye-T-Rex eSan Diego… iyathandabuza. Ihlabathi leJurassic LIYAVAKALISWA KAKHULU, ine-protagonist eyilukhangayo, eyona milo ilungileyo phakathi kweedinosaurs kwi-saga kwaye ngokubanzi kuyo yonke into ekufuneka ifilimu yolu hlobo ibe nayo.
YiJurassic Park, hayi iCitizen Kane. Xa ndisiya kuyibona ndiyathemba ukuzonwabisa kwaye ndiziva ndonwabile xa ndikhumbula eyokuqala, kwaye yile nto kanye indinika yona. Ungalibali inkcaza encinci. Xa sabona iJurassic Park sonke sasincinci kwaye iziphumo zekhompyuter zisasiphephetha.
Namhlanje sikhuselekile ekumangalisweni ngabo kwaye siqole ngakumbi njengababukeli, esingangeneki lula kubo. IJurassic Park iseyeyona ilungileyo, kodwa le ayinanto yakubamonela ngaphandle kokungabikho kwemiboniso yeemvakalelo.
Ukukufundela ndicinga ukuba endaweni yokungavumi konke konke, siyavuma. Ifilimu ingaphezulu kweyesithathu, ngaphandle kwamathandabuzo, iyonwabisa, ngaphandle kwamathandabuzo nayo, kodwa ikude neJurassic Park kwaye ikude nayo nayiphi na into ephambili.
Ngokuphathelele ukuzonwabisa, kuyinyani, kodwa akukho ziqulatho zokwenyani, njengalezo zibandakanya i-JP 1 kunye ne-2 ezikunike i-goosebumps. Ngokumalunga nobudala kunye neziphumo ezizodwa, ubumnyama yeyona nto iphambili yokwenza iziphumo kwaye uSpielberg wayebazi, nangona kunjalo kolu hlelo imibala iye yagqitywa, kwaye ayisiyonto mncinci kangako u-Alberto, umzekelo ndinikwe kakhulu ukubetha i-marathons yeefilimu endizithandayo xa ndinexesha lasimahla.
Eminye, ndiyavumelana nawe ngokupheleleyo kwaye ndicinga ukuba uya kuvumelana noDaniel waseCinemanía: Ibetha ukubetha okuchanekileyo, kodwa akushiye nto.
Ngokubhekisele kwibanga, asezantsi, zizithupha, imovie elungileyo, nangona kunjalo ndiqinisekile ukuba ndiza kuyibona kabini.
Imibuliso, enkosi ngokufunda kwaye ndiyathemba ukuba uyalithanda eli candelo litsha, inkxaso yabafundi kunye nenxaxheba yabo kwingxoxo mpikiswano ibalulekile, sivulekile kwiingcebiso.
Molo kwakhona. Ndivumelana ngakumbi noluvo lonjingalwazi wam weMbali yezeMidlalo, uMiguel Juan Payán kunye neqabane lakhe, bobabini abagxeki bephephancwadi elithi «Acción» (https://www.youtube.com/watch?v=NYhbGvCFRPA). Le yi-cinema kwaye incasa imibala, ngaphandle kwamathandabuzo. Into endiyaziyo kukuba yimovie yedinosaur, iJurassic World ibonelela ngayo yonke into enokuyenza. Intombi yam ichithe yonke imovie ibambe isandla sam siqinile, ke inyani yokuba ayinangxaki iyaxoxwa. Ayinayo indawo elungileyo njengee-T-Rex ezimbini kwilizwe elilahlekileyo. Ezo zinto zigcinelwe i-Master Spielberg kuphela. Okwangoku, yimovie eyonwabisayo ngakumbi kunaleyo.
Kunjalo nje. Nokuba unyanisile okanye awuchazanga malunga nebhetri yemoto… akukho mntu unokuphikisana nawe ukuba iibhetri zesigcina-ntloko zemibono yasebusuku zikwiminyaka engama-20 kamva, ngokungathandabuzekiyo kukusilela okuqaqambileyo. Kumdlalo bhanyabhanya bendothukile ukubona ukuba bangayenza njani impazamo enjalo.
Ngaba eli phepha le-Apple okanye sele lithetha ngayo nantoni na? Kwimeko apho, ndiyakholelwa ukuba iiPodemos azizukuphumelela kunyulo, ukuba uBenítez akachithi uDisemba eMadrid, ukuba iMishini ayinakwenzeka 5 yeyona nto iphambili ehlotyeni, kwaye iApple Watch ayisiyonto ingenamsebenzi ngexabiso elihlazo .
Molweni ngemini elungileyo.
Ngokwethiyori yakho ayililo iphepha le-Apple nokuba, kodwa njengoko igama layo libonisa ukuba iya kuba liphepha le-iPhone. Kodwa ukuba unokufumana malunga nenye into, ngelixa ukhangela kwiphepha elifanayo, elikusindisayo. Injongo iyafana njengesiqhelo, ukunceda nje.
Ngaphandle koko ndiyavumelana nawe kuyo yonke into ngaphandle kweApple Watch.
Ukuba uyavumelana nayo yonke into, nceda uzinikele ekwaziseni ngomxholo wewebhu, funda malunga nokujonga iifilimu nceda, kuba ndiye kwiwebhu ezinikele kuyo kwaye ngaphandle kokufanele umsebenzi wakho ngabantu abazinikele kuyo ngokomsebenzi, njengam Ngena apha undazise ngehlabathi le-iphone, hayi ipad, ipod whatch njl njl nceda.
Chesco Alaman sitsho
Ukushiya ecaleni ukuba ndiyavuma okanye andivumelani nenqaku, kukho inqaku lokuba ekuqondeni kwam uMiguel awukayiqondi: eyokuqala "iJurassic Park" iimoto zeJeep ezisetyenziswa ngabazalwana ukubaleka azinabhetri. Into abayenzayo ukuyitshintsha ibe inemoto "yeJurassic World" ebonakala ngathi yaphukile ecaleni kwesigcina-ntloko segazi (kunye nelogo yeJurassic yeHlabathi nayo) ekungeneni kwipaki endala.
Phendula Chesco Alaman
Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, amakhwenkwe amabini aphakathi kweminyaka eli-12 neli-18 ubudala ayakwazi ukuqala imoto esele imile iminyaka engama-20 kwaye iqokelela uthuli, ukusukela ngoko yonke into iyamangalisa. Ndiza kujonga imeko ukuba kunokwenzeka andilunganga. Umbuliso kunye nombulelo ngezimvo.
UEduardo Alcaino sitsho
Iibhetri ezisetyenziswa ngabafana ukuqala ijeep wrangler, yibhetri ye-UTV ehlaselwe yidinosaur, le intsha kwaye ithwalwa ngumlindi onesigcina-ntloko esifunyanwa yinkwenkwe
Phendula uEduardo Alcaino
Kwaye ngenxa yesi sizathu, indawo yetekhnoloji akufuneki ithethe nge-cinema ...
abantwana "abamdala kubudala besikolo esiphakamileyo kunye nabancinci abanye abancinci" ngokuka-anti wabo uClaire, bathi "bayilungisa imoto katatomkhulu (andisayikhumbuli imodeli)" kwaye kukutshintsha ibhetri kuphela, akanalo Kaninzi. Kwaye kum kunokuthenjwa kakhulu kuba ukusukela ndimncinci ndiye ndadibanisa nolo hlobo lolungiso olusisiseko.
Ukuba bendifuna ukufunda malunga ne-cinema, ngekhe ndibekhona kule bhlog. Ulahlekelwe ngumlandeli.
Ingxaki yokuphindaphinda okanye ukulahleka kweengoma ezivela kwiApple Music iya kulungiswa kungekudala